Ahoana ny fampiasana Adobe Stock Free ary misintona sary Adobe Stock Free?
Photo Retouching Services > Retouching Blog > Malagasy Blog > Adobe Stock Maimaim-Poana
By Ann Young, Mathis Ravatomanga 2022-01-10, Malagasy Blog
Version: Lisansa feno
Atombohy ny maimaim-poana
Te hampiasa maimaim-poana amin'ny Adobe Stock ve ianao, misintona sary, modely, sary, sary an-tsary maimaimpoana nefa tsy mandoa $ 30 isam-bolana? Etsy ambany no hilazako aminao ny fomba tokana ahafahana misintona sary Adobestock maimaimpoana ary manome lisitra kely misy safidy Adobe Stock maimaim-poana.
HAHAZOANA sary 10 ADOBE STOCK
Tombontsoa Adobe Stock FREE
Iray amin'ireo tranomboky lehibe indrindra sary
Nifandray tsara tamin'ny vokatra Adobe hafa
Fikarohana mandeha amin'ny herin'ny AI ary autocomplete lehibe
Ny fomba tokana hampiasana ny Adobe Stock maimaim-poana mandritra ny 30 andro dia ny fampidinana ny fitsapana MAIMAIM-POANA Adobe Stock. Hiditra amin'ny sary mihoatra ny 100 tapitrisa ianao. Hahazo fananana 10 Adobe Stock standard ho an'ny 1 andro ianao. Ny zavatra voalohany sy manan-danja indrindra amiko dia ny tsy tokony handikana ny lalàna momba ny zon'ny mpamorona. Ara-dalàna tanteraka ny kinova andrana maimaimpoana. Tsara koa ny manonona fa tsy ho voafetra amin'ny fampiasa ianao. Ireo fitaovana sy fiasa rehetra azo alaina ao amin'ny kinova aloa dia eo ihany koa.
Makà maimaimpoana ny Lightroom
link_link_88 hanovana ny sarinao.
Adobe Stock Free FAQ
Raha mbola manana fanontaniana ianao dia vakio ity lisitra FAQ ity izay hamaly azy rehetra.
Azoko atao ve ny mampiasa ny kinova fitsapana maimaimpoana imbetsaka?
Tsia, ny fampiasana ny Free Trial dia tsy misy indray mandeha isaky ny programa isaky ny kaonty ID ID tokana.
Azoko atao ve ny manova ny drafitra fisoratana anarana nosafidiko teo aloha?
Eny. Mandehana mankany amin'ny tranonkala Adobe ofisialy. Midira ao amin'ny kaontinao ary safidio ny safidy ilainao ao amin'ny fizarana "My Subscription".
JEREO NY Drafitra
Azoko atao ve ny mamerina ny volako raha tsy mila ilay programa aho?
Eny, raha 14 andro no tsy nandalo hatramin'ny nandoavana farany. Mifandraisa amin'ny ekipa mpanohana ara-teknika ary omeo antony ny famerenam-bola.
Afaka mahazo fihenam-bidy ve aho?
Eny. Malala-tanana amin'ny mpianatra sy ny mpampianatra i Adobe, manome azy ireo fihenam-bidy ho an'ny sary Adobe Stock hatramin'ny 60%. Raha tsy mpianatra na mpiasan'ny andrim-pampianarana ianao dia araho ny vaovao avy amin'ny pejy ofisialy, ny orinasa dia mandefa lahatsoratra momba ny fampiroboroboana isan-karazany indray mandeha isam-bolana.
Inona no tokony hataoko raha nametraka ilay rindrambaiko aho nefa tsy mandeha?
zahao ny takiana farafahakeliny ary ampitahao amin'ny fahaizan'ny PC anao. Raha mifanitsy ity angona ity, mifandraisa amin'ny fanampiana. Mety misy viriosy na fianjerana amin'ny rafitra ny solosainao.
Maninona aho no tsy afaka misintona sary ary mampiasa azy ireo maimaim-poana?
Raha efa niasa tamina sarin'olona iray ianao, ohatra, nampiasa azy io tamina tetikasa na sora-baventy, dia hitanao angamba fa zon'ny mpamorona izany, saingy tsy dia narahinao loatra io zava-misy io. Toy ny fitsipika, ny mpamorona tsy manam-pahaizana dia tsy mampiasa sary maimaimpoana Adobe. Mamonjy sary avy amin'ny Internet fotsiny izy ireo ary manohy miasa miaraka aminy.
HAHAZO 10 MAIMAIM-POANA AVY amin'i ADOBE
Raha anisan'ireny ianao dia hanana olana ara-pitsarana sy sazy 2 500 $ . Izay sary, horonan-tsary ary sary apetraka amin'ny Internet dia azo arovan'ny zon'ny mpamorona. Ny fanitsakitsahana azy dia mety mitaky fitsarana sy fandoavana onitra, asa eo amin'ny fiaraha-monina na fanagadrana mihitsy aza.
5 Alternatives Adobe Stock Free maimaim-poana
Raha tsy afa-po amin'ny fandoavam-bola isam-bolana ho an'ny Adobe Stock ianao na ny fiasa sy ny fitaovany, dia azonao atao ny manandrana ireo safidy Adobe Stock maimaimpoana sy shareware ireo.
Mampiasà SHUTTERSTOCK MAIMAIMPOANA
Ny fototry ny rakitra lehibe indrindra
Mpanonta sary namboarina
Ny sary dia azo vidiana amin'ny alàlan'ny famandrihana na amin'ny tsirairay
Vidin'ny famandrihana avo
Shutterstock no manana ny fitehirizam-bokin'ny sary lehibe indrindra manerantany. Ny fanangonana azy dia misy sary maherin'ny 200 tapitrisa. Shutterstock koa dia manana loharanom-pahalalana horonantsary, mozika ary fanontana maro karazana, ary koa atiny manokana. Niorina tamin'ny 2003 ary nirotsaka tamin'ny maodely famandrihana sary fakana sary.
sary azo vidiana tsirairay na amin'ny alalan'ny famandrihana. Ireo mpisera dia afaka mampiasa ny fitaovan'ny tonian-dahatsorin'ny Shutterstock, izay ahafahan'izy ireo manamboatra sy manitsy haingana ny sary. Afaka manao cropping ianao ary manampy sivana eto.
Sary sy horonan-tsary maimaim-poana
Famandrihana mora vidy
Tranonkala tsy voatsara tsara
Seho fikarohana tsy lavorary
Dreamstime dia loharanom-baovao vaovao manana laza tsara. Noforonina ho toy ny tranokala tahiry maimaimpoana izy io, loharanom-pahalalana sary iray ho an'ireo masoivohon'ny dokambarotra, magazine ary orinasan-tserasera. Ny sary dia amidy amin'ny alàlan'ny famandrihana na amin'ny alàlan'ny trosa (fandoavam-bola amin'ny fisintomana).
fanangonana nofinofy dia misy sary, horonan-tsary, mozika ary feo, sary, sary ary sary vongana mihoatra ny 81 tapitrisa. Azonao atao ihany koa ny misintona angon-drakitra tsy miankina amin'ny fanjakana ambony sy malalaka amin'ny daholobe amin'ity tranokala ity.
Mampiasà DEPOSITPHOTOS MAIMAIMPOANA
Famandrihana mora azo
Fotodrafitrasa kely kokoa raha oharina amin'ireo mpifaninana
Ity dia tranonkala iray hafa tsara miaraka amin'ny vidin'ny fifaninanana izay mifanaraka amin'ireo mitady sary stock maimaimpoana. Ny fitehirizam-boky dia misy sary, sary, alàlan'ny sary sy sary mihetsika maherin'ny 75 tapitrisa izay tsy mitaky valisoa ary manana safidy malalaka amin'ny sokajy sasany.
Ohatra, ny fizarana "Fitsaboana sy fahasalamana" dia misy sary maherin'ny 1,7 tapitrisa. Ny rakitra dia azo vidiana amin'ny alàlan'ny famandrihana na drafitra fampindramambola tokana tokana. Ny tranokala koa dia manana safidy mora vidy mitentina $ 9,99 / volana ho an'ny sary 10 sy sary haingon-tsary avo lenta.
Mampiasà MAIMAIMPOANA 123RF
Endri-javatra fikarohana tsara
Fototry ny fisie
123RF dia mpamatsy atiny ho an'ny tahiry micro izay tsy mila saram-pitsarana. Ny tranokala dia manao fanovana be dia be hatrany ary manana rafitra fikarohana sary tsara. Azonao atao ny misafidy sary maimaimpoana mihoatra ny 103 tapitrisa, sary vektor, horonan-tsary ary rakitra audio.
123RF koa dia manolotra midadasika kokoa ny sokajy isan-karazany noho ny toerana hafa aza. Raha mampakatra sary dia mila mividy mari-pankasitrahana ianao, mahazo fonosana misintona na misoratra amina drafitra iray.
Mampiasà ALAMY MAIMAIMPOANA
Iray amin'ireo toby fitahirizana rakitra tsara indrindra
Famandrihana lafo loatra raha ampitahaina amin'ny mpifaninana
Alamy dia arisiva an-tserasera misy tahiry 140 tapitrisa mahery, sary sy horonan-tsary. Sary vaovao 100 000 no ampiana ao amin'ny fanangonana isan'andro. Ity serivisy ity dia manome sary avo lenta kokoa noho ny tranonkala hafa. Voaforona tsara ny sary. Kanto sy mavitrika izy ireo.
Fisoratana anarana dia tsy maintsy hividy sary. Ary koa, tsy ilaina ny mividy mari-bola na famandrihana. Ny vidiny dia manomboka amin'ny $ 19.99 ary miankina amin'ny karazana fahazoan-dàlana sy ny haben'ny fisie ilainao. Ho fanampin'izany, Alamy dia manolotra sary maro mamorona.
Sintomy ny Photoshop maimaim-poana hanaovana fanovana sary matihanina.
Sintomy ny sary maimaimpoana amin'ny fanovana sary
Sintomy ny sary maimaimpoana
Zahao ny fanangonana sary maimaimpoana azonao ampiasaina hampiofanana ny fahaizanao manova sary na manandrana ny preset Lightroom, ny hetsika Photoshop nefa tsy manakarama modely na mividy sary.
Mampiasà Adobe Stock Free
Fitsarana maimaimpoana 1 volana an'ny Adobe Stock
Mba hitsapana ity sehatra ity dia soraty ny kinova fitsapana ofisialy. Manome anao fotoana hampiasa Adobe Stock maimaim-poana mandritra ny iray volana. Afaka mampiasa tahiry Adobe maimaim-poana mandritra ny 30 andro ianao izao.
Maimaimpoana ny Adobe Stock
Fa maninona no atsahatra ny mampiasa kinova piraty?
Sintomy ny sary manta maimaim-poana
Sintomy ny sary stock stock Adobe 10 maimaim-poana
Adobe Bridge maimaimpoana
Adobe Media Encoder Maimaimpoana
Photoshop Elements maimaim-poana
Photoshop ho an'ny Mac
Maimaimpoana Adobe Premiere Elements